Send 38 ईमेल मार्केटिंग गल्तीहरू क्लिक पठाउनु भन्दा पहिले जाँच गर्न Martech Zone
Email 38 ईमेल मार्केटिंग गल्तीहरू क्लिक गर्नु भन्दा पहिले जाँच गर्न
सोमबार, मार्च 16, 2020 सोमबार, अगस्ट 23, 2021 Douglas Karr
त्यहाँ एक टन अधिक गल्तीहरू छन् तपाइँ तपाइँको पूरा ईमेल मार्केटिंग प्रोग्रामसँग गर्न सक्नुहुन्छ ... तर यो ईमेल भिक्षुबाट इन्फोग्राफिक हामी ती क्लिक गर्नुभन्दा अघि हामीले गर्ने ती लापरवाह गल्तीहरूमा केन्द्रित छ। तपाईं यहाँ हाम्रो पार्टनरहरूको केहि उल्लेख देख्नुहुनेछ 250ok डिजाइन र वितरण कार्यक्षमता मा। यसमा हाम फाल्नुहोस्:
हामी सुरू गर्नु अघि, के हामी असफलता वा सफलताको लागि सेट अप हुन्छौं? मा हाम्रो प्रायोजकहरू 250ok एक अविश्वसनीय समाधान छ कि तपाइँ ईमेल प्रतिष्ठा, वितरण, र इनबक्स प्लेसमेंट को सम्बन्ध मा वस्तुतः हरेक मुद्दा निगरानी मा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
समर्पित आईपी - तपाईंको ईमेल सेवाको समान आईपी नेटवर्कमा खराब प्रेषकद्वारा तपाईंको डेलिभरेबिलिटीलाई नष्ट हुन नदिनुहोस्।
इनबक्स प्लेसमेन्ट - ईनबक्स अनुगमन समाधान प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको ईमेल प्रमाणित गर्नका लागि तपाईंको ईमेलहरू केवल कबाडी फोल्डरमा डेलिभर भइरहेको छैन, ती ईनबक्स बनाउँदैछन्।
छुटकारा - खराबको लागि राम्रो ईमेल सेवा नत्याग्नुहोस् र तपाइँको छुट्याउने क्षमतालाई नष्ट गर्नुहोस्।
कालोसूचीहरू - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको IP ठेगाना एक प्रेषक ब्ल्याकलिस्टमा छैन, वा अन्यथा तपाईं गरीब छुटकारा वा इनबक्स प्लेसमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ।
डोमेन - पठाउनुहोस् र राम्रो ईमेल डोमेन कायम राख्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो प्रतिष्ठा (आईपीको साथ) निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ।
SPF - प्रेषक नीति फ्रेमवर्क कन्फिगरेसन आवश्यक छ त्यसैले ISP हरूले गर्न सक्दछ ISP हरू प्रमाणिकरण गर्न सक्दछ र तपाईंको ईमेलहरू प्राप्त गर्दछ.
DKIM - DomainKeys पहिचान गरिएको मेल ट्रान्जिटमा रहेको सन्देशको लागि संगठनलाई जिम्मेवारी लिन अनुमति दिन्छ।
DMARC - DMARC ISP हरू प्रदान गर्नको लागि अन्तिम प्रमाणीकरण मोडेल हो जुन उनीहरूलाई तपाईंको ईमेल मार्फत पठाउन आवश्यक पर्दछ।
प्रतिक्रिया लुप्स - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले प्रतिक्रिया कार्यान्वयन गर्नुभएको छ त्यसैले ISP बाट जानकारी तपाईको ESP लाई रिपोर्ट गरिएको ई-मेलमा सुधार गरिएकोमा रिपोर्ट गर्न सकिन्छ।
ग्राहक व्यवस्थापन एक स्वस्थ ईमेल मार्केटिंग कार्यक्रमको एक अनिवार्य घटक हो।
अनुमति - ISPs को साथ आफैंलाई समस्यामा नपार्नुहोस्। ईमेल गर्नका लागि अनुमति माग्नुहोस्।
प्राथमिकताहरू - प्रदान र तपाइँको ग्राहकहरु को लागी फ्रिक्वेन्सी मा अपेक्षा सेट।
निष्क्रिय - सदस्यता रद्द गुनासो र स of्लग्नताको अभाव घटाउन निष्क्रिय सदस्यता हटाउनुहोस्।
Frequency - फ्रिक्वेन्सी यति उच्च छैन कि तपाइँको ग्राहकहरु छोड्नुहोस्।
विभाजन - के तपाईंले आफ्नो विभाजनमा दोहोरो-जाँच गणना र शुद्धता पाउनुभयो?
यो जहाँ पैसा हो तर धेरै कम्पनीहरूले केहि विनाशकारी सामग्री गल्ती गर्छन्।
बोरिंग विषय लाइनहरु - यदि तपाईं कोही खोल्न चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई कारण दिनुहोस्! चेक आउट गर्नुहोस् एक्टिभ क्याम्पियनको विषय लाइन जेनरेटर सहयोगको लागि।
प्रमाणीकरण - के तपाईंले व्याकरण र हिज्जे मुद्दाहरूको लागि तपाईंको पाठ प्रुफरीड गर्नुभयो? कसको आवाजको बारेमा?
कडा CTAs - तपाईंको कल-टु-एक्शन मोबाइल वा डेस्कटपमा बाहिर खडा गर्नुहोस्!
FNAME - यदि तपाईंसँग तपाईंको सबै ग्राहकहरूको नाम छैन भने, तिनीहरूलाई ठेगाना नदिनुहोस्! वा तर्क प्रयोग गर्नुहोस्।
क्षेत्रहरू मर्ज गर्नुहोस् - अन्य सबै मानचित्र पठाउन अघि तपाईंको सबै डाटाको परीक्षण गर्नुहोस् र गतिशील सामग्रीले तपाईंलाई अम्भारा गर्नेछ।
पृष्ठभूमि - इमेन्ट क्लाइन्ट भर पृष्ठभूमि परीक्षण गर्नुहोस् ... धेरैले त्यसलाई प्रयोग गर्दैनन्।
बटन छविहरू बटनको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तपाईंको बटनहरू सबै ईमेल क्लाइन्टहरूमा उत्तम देखिन्।
अंतर्राष्ट्रीयकरण - के तपाईं उचित लग्ज सेटिंग्स र तपाईंको ग्राहकहरूको लागि प्रतीकहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
typography - उपकरणहरू र ग्राहकहरूको लागि फलो-ब्याकको साथ फन्टहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन उनीहरूलाई समर्थन गर्दैन।
सामाजिक - के तपाईंसँग तपाईंको सामाजिक मिडिया खाताहरूमा लिंकहरू छन् ताकि व्यक्ति मित्र बनाउन र फलो गर्न सक्छन्?
मा हाम्रो प्रायोजकहरू 250ok प्रत्येक प्रमुख ईमेल क्लाइन्ट भर तपाईंको ईमेल पूर्वावलोकन गर्न पूर्वावलोकन विकल्प छ।
अं - एक ईमेल पूर्वावलोकन मा तपाईंको पहिलो केहि लाइनहरु बाध्यकारी हेर्न ईमेल परीक्षण गर्नुहोस्
alt - हरेक छविको साथ बाध्यकारी वैकल्पिक पाठको उपयोग गर्नुहोस्।
परीक्षण - परिक्षण विषय लाइन, लिंक, CTAs, personalizaiton, प्रमाणीकरण र विविधता।
सदस्यता रद्द - साना फन्टहरू र अस्पष्ट सदस्यता रद्द गर्दछ मलाई तपाईं संग कहिल्यै व्यापार गर्न बाट।
अनुक्रम - महान मोबाइल हेर्नको लागि लामो, अनुभागित ईमेलहरूको लागि समझौताहरू समावेश गर्नुहोस्।
रेटिना - आधुनिक एप्पल उपकरणहरूले प्रयोग गर्ने रेटिना डिस्प्लेका लागि अनुकूलित उच्च रिजोलुसन छविहरूको उपयोग गर्नुहोस्।
उत्तरदायी - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ईमेल मोबाइल र ट्याब्लेट उपकरणहरूमा उत्कृष्ट देखिन्छ। तपाईं चाँडै नै पहिरन थप्न चाहानुहुन्छ!
ईमेलको मेकानिक्स र यसले कसरी कार्य गर्दछ जब तपाईंको ग्राहकको इनबक्समा आउँदछ यसले तपाईंको विश्वसनीयता साथै तपाईंको क्लिक-थ्रु र रूपान्तरण दरहरूमा असर गर्न सक्छ।
ठेगानाबाट - पहिचानयोग्य 'ठेगानाबाट' प्रयोग गर्नुहोस्
ठेगानामा जवाफ दिनुहोस् - किन noreply @ प्रयोग गर्नुहोस् जब त्यहाँ जडान र बेच्ने अवसरहरू छन्?
तार्किक रूपमा - तपाइँका ड्रिप अभियानहरू तार्किक रूपमा कार्यान्वयन भएको निश्चित गर्नुहोस्।
लिंक - के तपाईले सबै लि to्कहरूलाई ईमेलमा पठाउनु अघि सबै लिंकहरू परीक्षण गर्नुभयो?
ल्यान्डिङ पृष्ठहरू - केहि फारम फाँटहरूको साथ उच्च रूपान्तरण अवतरण पृष्ठहरू निर्माण गर्नुहोस्।
रिपोर्ट - तथ्या capture्कहरू क्याप्चर गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्नुहोस्, र तपाईंको ईमेल मार्केटिंग प्रयासहरू सुधार गर्नुहोस्।
अनुपालन - के तपाईंसँग आफ्नो फुटरमा पूर्ण कानूनी अनुपालनको लागि सबै आवश्यक जानकारी छ?
[बक्स प्रकार = "डाउनलोड" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "] ०%"] ईमेल Monks 'द्रुत समीक्षा डाउनलोड गर्नुहोस् चेकलिस्ट तपाईंले पठाउनु भन्दा पहिले जाँच गर्नका लागि आईटमहरूको। यो एक सानो सानो PDF हो! [/ बक्स]
टैग: dkimDMARCDomainKeys पहिचान गरिएको मेलईमेल करारईमेल पृष्ठभूमिईमेल बटनहरूईमेल CTAsईमेल फन्टहरूईमेल फ्रिक्वेन्सीईमेल अन्तर्राष्ट्रियकरणईमेल मर्ज क्षेत्रहरूईमेल अनुमतिईमेल रेटिनाईमेल विषय लाइनहरुईमेल प्रतिस्थापन तारईमेल परीक्षणईमेल टाइपोग्राफीईमेल सदस्यता रद्द गर्नुहोस्FNAMEछविनिष्क्रिय ग्राहकहरुअनुमतिउत्तरदायीरेटिनाspfमजबूत CTAsग्राहक अनुमतिग्राहक प्राथमिकताहरूप्रतिस्थापन तार
किन प्रत्येक इकामर्स व्यवसायलाई गतिशील मूल्य निर्धारण उपकरणको आवश्यकता पर्दछ?
Zenkit: टोलीहरू, उपकरणहरू र कम्पनिहरूमा कार्यहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्
मार्स 10, 2016 मा 5: 26 एएम
यी ईमेल मार्केटिंग गल्तीहरूसँग पूर्ण सहमत।
मलाई पनि लाग्छ कि यी प्राय जसो गल्तीहरू छन् जुन प्राय जसो ईमेल मार्केटरहरूले गर्छन्। बोरिंग विषयको साथ ईमेलहरू पठाउनु धेरै साधारण गल्ती हो।
म कहिले पनि कुनै ईमेल खोल्दिन जुन मेरो आँखालाई आकर्षित गर्दैन। म जहिले पनि त्यस्ता ईमेलहरूलाई तुरून्तै वेवास्ता गर्दछु वा मेटाउँछु।
ईमेल बजारहरूले बुझ्नु पर्छ कि कोही पनि बोरिंग ईमेलहरू पढ्नमा तिनीहरूको समय बर्बाद गर्न चाहँदैनन्। यदि तपाईं वास्तवमै तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले आँखा आकर्षक, आकर्षक र आशाजनक विषय लाइन भएको ईमेलहरू पठाउनुपर्नेछ। किनभने यो केवल रेखा हो जुन पाठकहरू पहिले पढ्छन्।
त्यसैले यसको ख्याल राख्नु तपाईंको कौशल सुधार गर्न सक्दछ।
म खुसी छु कि तपाईंले यहाँ सबै प्रमुख ईमेल मार्केटिंग गल्तीहरू सूचीबद्ध गर्नुभएको छ ता कि हामी तिनीहरूलाई सिक्न सक्छौं र तिनीहरूबाट बच्न सक्छौं। हामीसँग यसलाई साझेदारी गर्नु भएकोमा धन्यवाद। 😀